कोरियामा के खोजिँदो रहेछ गुगलमा सबैभन्दा धेरै? हेरौं गुगलमा खोजिएका टप-१० कुरा – Eps Sathi
कोरियामा के खोजिँदो रहेछ गुगलमा सबैभन्दा धेरै? हेरौं गुगलमा खोजिएका टप-१० कुरा
December 27, 2021 870
गुगलले सन २०२१ मा दक्षिण कोरियाबाट खोजी अर्थात सर्च गरीएका कुराहरुको रेङ्किङ सार्वजनिक गरेको छ। गुगल कोरियाको ब्लगमा राखिएको यो रङ्किङमा सन २०२१ भरी दक्षिण कोरियाबाट गुगलमा खोजिएका शब्द तथा वाक्यहरुलाई सबैभन्दा धेरैका आधारमा राखिएको छ। सन २०२१ मा सबैभन्दा धेरै के कुरा खोजियो त कोरियामा? आज यस बारेमा कुरा गरौं।
दक्षिण कोरियामा सन २०२१ मा गुगलमा सबैभन्दा धेरै खोजिएको शब्द हो ‘रोब्लक्स’। रोब्लक्स एउटा मेटाभर्स गेम प्लाटफर्म हो। यो बर्ष विश्वमै मेटाभर्सको चर्चा चुलिएसँगै कोरियामा पनि यसको चर्चा बढेको हुनाले यो शब्द गुगलमा बढि खोजिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। गत फेब्रुअरी महिनामा रोब्लक्सले १० करोड मासिक एक्टिभ ग्राहकसंख्या पूरा गरेको थियो। को’रोनाका कारण भएको सामाजिक दूरीका नि’यमका कारण मानिसहरु घरभित्रै बस्नुपर्ने अवस्था आएसँगै गेमिङ प्लाटफर्महरुको ग्राहक ह्वात्तै बढेका थिए।
त्यसैगरी सन २०२१ मा कोरियामा गुगलमा खोजिएको दोश्रो शब्द हो ‘को’भि’ड१९ भ्या’क्सिनेशन’। गत फेब्रुअरी महिनाबाट कोरियाले देशभर खो’ अभियान सुरु गरेको थियो। सन २०२१ भरी कोरियालीहरुको मुख्य जिज्ञासाको रुपमा खो’प रहन गयो। खो’प रिजर्भेसन गर्न तथा लगाउने कुरामा उनिहरुको ध्यान तानिएका कारण पनि यो शब्द सन २०२१ भर कोरियामा धेरै मानिसले सर्च गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
तेश्रो धेरै खोजिएको शब्दमा ‘स्क्विड गेम’ परेको छ। विश्वचर्चित मेगाहिट यो नेटफ्लिक्स सिरिजले कोरिया मात्रै नभएर विश्वलाई नै एकपटक तताएको थियो। यसकै कारण पनि यो शब्द कोरियामा धेरै सर्च भएको हुन सक्दछ। यस्तै सन २०२१ मा कोरियामा धेरै खोजिएको चौथो शब्द हो ‘टेस्ला स्टक’। पाँचौ नम्मरमा रहेको शब्द छ ‘बिटक्वाइन’। सन २०२० मा विश्वभर सेयर बजारमा गिरावट आएका कारण सन २०२१ मा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना भएका कारण कोरियामा पनि लगानीकर्ताको आकर्षणमा यि स्टक तथा लगानी पर्न गएका कारण बढि सर्च भएको अनुमान गरिएको छ।
यस्तै सन २०२१ मा कोरियामा सबैभन्दा बढि सर्च भएका शब्दहरुको छैठौं नम्मरमा ‘किम सिओन हो’ रहेको छ। सातौं नम्मरमा ‘फाइण्डिङ कोभिड१९ भ्याक्सिनेशन फेसिलिटी’ रहेको छ भने आठौं नम्मरमा ‘सामसङ इलेक्ट्रोनिक्स स्टक’ परेको छ। ‘पोपक्याट’ ले नवौं स्थान ओगट्न सफल भएको छ भने दशौं नम्मरमा ‘लस्ट आर्क’ परेको छ। गुगल कोरियाले विभिन्न क्षेत्रका आधारमा समेत यस्तो रेङ्किन प्रकाशित गरेको छ। यि सबै रेङ्किङ गुगल कोरियाको ब्लगमा गइ हेर्न सकिन्छ।
Prevकोरियामा घट्यो कोरोना, आज दैनिक संक्रमित संख्या २० दिन यताकै सबैभन्दा कम
Nextकोरियाले अब नयाँ क्षेत्रमा नेपाली कामदार लैजाने, नयाँ भाषा परीक्षा समेत यो मितिमा गर्ने तयारी